Ndeapi kodzero dzako semaroja? | Law & More B.V.
Blog » Ndeapi kodzero dzako semaroja?
Muroja wese ane kodzero ane kodzero mbiri dzakakosha: kodzero yekunakidzwa yekurarama uye kodzero yekurendesa dziviriro. Kwatakakurukura nezvekodzero yekutanga yemuroja maererano zvinosungirwa nemuridzi wemba, kodzero yechipiri yemuroja yakauya mune rakasiyana blog nezve kudzivirirwa kwerendi. Ndokusaka mumwe mubvunzo unonakidza uchizokurukurwa mune ino blog: ndeapi mamwe kodzero ane roja ane? Kodzero yekunakidzwa yekurarama uye kodzero yekurenda dziviriro handiyo yega kodzero iyo roja anayo pakurwisa muridzi wemba. Semuenzaniso, roja ane kodzero zvakare kune akati wandei kodzero mune mamiriro ekuchinjisa chivakwa chisingayambuke roja uye uye kudzikisira. Kodzero dzose dziri mbiri dzinokurukurwa zvakateedzana mune ino blog.
Kutamisirwa kweimba hakuyambuke rendi
Ndima 1 yeChinyorwa 7: 226 yeDutch Civil Code, iyo inoshanda kune maroja ekugara nenzvimbo yekutengesa, inotaura zvinotevera:
"Kutamisirwa kwenzvimbo inoenderana nezvechibvumirano chevaridzi (…) nemuridzi wemba inochinjisa kodzero nezvisungo zvemuridzi wemba kubva pachibvumirano che tenenti kuenda kune anowana.. "
Kune roja, chinyorwa ichi chinoreva kwekutanga kune zvese kuti kuchinjirwa kwemuridzi wepfuma yakabhadharwa, semuenzaniso kuburikidza nekutengesa nemuridzi wemba kune mumwe, hakupedze chibvumirano chekurenda. Pamusoro pezvo, muroja anogona kusimbisa zvirevo pamusoro peanomutsiva zviri pamutemo, iye zvino sezvo mutsivi wepamutemo atora kodzero nezvisungo zvemuridzi wemba. Pamubvunzo wekuti zvii chaizvo zvinonzi nemuroja zvave nazvo, zvakakosha kutanga waona kuti ndeapi kodzero nezvisungo zvemuridzi wemba zvinopfuura kumutevedzeri wake zviri pamutemo. Zvinoenderana nechikamu chetatu cheChinyorwa 3: 7 cheCivil Code, aya ndiwo kodzero uye zvisungo zvemuridzi wemba zvine chekuita nekushandiswa kwenzvimbo yekurendesa kuti itariswe kubhadharwa nemuroja, kureva, rendi. Izvi zvinoreva kuti zvirevo zvekuti muridzi anogona kuita zvinopesana nemuridzi wemuridzi, zviri pamutemo, zvine chekuita nekodzero dzake mbiri dzakakosha: kodzero yekunakidzwa yekurarama uye kodzero yekurendesa.
Kazhinji, zvakadaro, roja nemuridzi wemba vanoitawo zvimwe zvibvumirano muchibvumirano chekurenda maererano nezvimwe zvirimo uye vanorekodha izvi muzvikamu. Muenzaniso wakajairika chidimbu chine chekuita nekodzero yemuroja. Kunyangwe isina kupa muroja mukana wekuendesa, zvinoreva chisungo chemuridzi wemba kuti ape: muridzi wemba achatanga kupa nzvimbo yakabhadharwa yekutengesa kumuridzi isati yatengeswa kune mumwe anotsiva zviri pamutemo. Muridzi wemba anotevera achasungwawo neichi chirevo kune roja? Mukuona kwemutemo wenyaya, iyi haisi iyo nyaya. Izvi zvinopa kuti pre-isina chekuita kodzero yemuroja haina kuenderana zvakananga nerendi, kuitira kuti chirevo chine chekuita nekodzero yekutenga kweicho chakabhadharwa chisapfuure kune anotsiva zviri pamutemo iye muridzi wemba. Izvi zvinongosiyana kana zvine chekuita nesarudzo yekutenga kubva kumuroja uye mari inobhadharwa nguva nenguva kumuridzi wemba inosanganisirawo chinhu chemuripo wekuwana kwekupedzisira.
Uye zvakare, Chinyorwa 7: 227 cheCivil Code chinotaura zvinotevera maererano nekodzero dzemuroja:
"Muroja anobvumidzwa kupa iyo roja iri kushandiswa, yakazara kana chikamu, kune mumwe munhu, kunze kwekunge achifungidzira kuti muridzi angave anoshora zvine musoro kushandisa kwemumwe munhu."
Muzhinji, zviri pachena kubva muchinyorwa chino kuti roja ane kodzero yekuisa zvese kana chikamu cheicho chakabhadharwa kune mumwe munhu. Tichifunga nezve chikamu chechipiri cheChinyorwa 7: 227 cheCivil Code, roja haakwanise, zvakadaro, kuenderera mberi nekunyengerera kana aine zvikonzero zvekufungidzira kuti muridzi wemba acharamba izvi. Mune zvimwe zviitiko, kuramba kwemuridzi wemba kunoonekwa, semuenzaniso kana kurambidzwa kwekutsvaga kuchisanganisirwa muchibvumirano chekurenda. Muchiitiko ichocho, kuisa pasi nemuroja hakubvumidzwe. Kana roja rikaita izvi zvakadaro, panogona kunge paine muripo mukudzoka. Iyi faindi inofanira kubva yabatanidzwa nekurambidzwa kwekuisa pasi muchibvumirano chekurenda uye kusungwa kune yakanyanya mari. Semuenzaniso, kuiswa kweimwe imba kubva kuAir B&B kunogona nenzira iyi kurambidzwa muchibvumirano, izvo zvinowanzoitika kuti ndizvo zvazviri.
Muchirevo chechinyorwa chino, chinyorwa 7: 244 cheCivil Code chakakoshawo kuti nzvimbo yekugara igadziriswe, iyo inoti roja renzvimbo haibvumirwe kubhadharisa nzvimbo yese yekugara. Izvi hazviite kune chikamu chenzvimbo yekugara, senge imba. Mune mamwe mazwi, roja iri musununguko yemahara kuisa zvishoma nzvimbo yekugara kune mumwe. Mukutaura, iyo subtenant zvakare ine mvumo yekugara munzvimbo yekurendesa. Izvi zvinoshandawo kana muroja achifanira kusiya nzvimbo yairoja iye. Mushure mezvose, Chinyorwa 7: 269 cheDutch Civil Code chinopa kuti muridzi wemba acharamba achinyudza nekushanda kwemutemo, kunyangwe chibvumirano chikuru chekurenda chapera. Nekudaro, iyo inotevera mamiriro anofanirwa kusangana nekuda kwezvinangwa zvechinyorwa chino:
Nzvimbo yakazvimiririra yekugara. Mune mamwe mazwi, nzvimbo yekugara ine yayo yega yekuwana uye nezvayo zvakakosha zviwanikwa, senge kicheni uye imba yekugezera. Imba chete saka haionekwe senzvimbo yekuzvimiririra yekugara.
Sublease chibvumirano. Kuva chibvumirano pakati pemuroja neastenant icho chinosangana nezvinodiwa pachibvumirano chekurenda, sezvakatsanangurwa muChinyorwa 7: 201 cheiyo Civil Code.
Chibvumirano cheRisi chine chekurenda kwenzvimbo yekugara. Mune mamwe mazwi, chibvumirano chikuru chekurenda pakati pemuroja nemuridzi wemba chinofanirwa kuenderana nerendi uye rezenisi yenzvimbo iyo nzvimbo yekugara zviri pamutemo inoshanda.
Kana zvisungo zvataurwa pamusoro zvisina kuteedzerwa, mutendi haana kodzero kana zita rekukumbira kumuridzi wemba kodzero yekuramba ari muchivako chemba mushure mekunge chibvumirano chikuru chekurenda pakati pemuroja nemuridzi chapera, kuitira kuti kudzingwa zvakare zvisingadzivisike kwaari. Kana iyo subtenant ikasangana nemamiriro ezvinhu, inofanirwa kufunga nezvekuti muridzi wemba anogona kutanga matanho achipesana neastenant mushure memwedzi mitanhatu kuti aunze kugumiswa kwekuisa uye kubvisa kwe let.
Kungofanana nenzvimbo yekugara, yekutengesa nzvimbo inogona zvakare kuve sublet nemuroja. Asi iyo subtenant inoenderana sei nemuridzi wemba mune iyi kesi, kana roja anga asina kupihwa mvumo yekuzviita kana kufanira kusiya imba yekurendesa? Kwegore ra2003 kwaive nemusiyano wakajeka: muridzi wemba anga asinei nechepasi nekuti muridzi wacho aingova nehukama hwepamutemo nemuroja. Nekuda kweizvozvo, iye subtenant aivewo asina kodzero uye nekudaro chikumbiro chinopesana nemuridzi wemba. Kubva ipapo, mutemo wakashanduka pachinhu ichi uye unotaura kuti kana chibvumirano chikuru chekurenda pakati pemaroja nemuridzi wemba chapera, muroja anofanira kutarisira zvido uye chinzvimbo chemubati, semuenzaniso, kujoina iyo subtenant mune inoitika ne muridzi wemba. Asi kana chibvumirano chikuru chekurenda chakamiswa mushure mekutongwa, kodzero dzestenant dzichapera zvakare.
Iwe uri roja here uye une chero mibvunzo zvine chekuita neiyi blog? Wobva wabata Law & More. Magweta edu inyanzvi mumunda wemutemo we tenendi uye vanofara kukupa iwe kuraira. Ivo vanogona zvakare kukubatsira iwe zviri pamutemo kana yako nharo yekurenda ikonzera mukutongwa kwemutemo.
Previous Post Kudzivirira rendi
Next Post Aimbova mudiwa ane kodzero yekuchengetedza haadi kushanda